၂၀၂၁ မြန်မာ့နွေဦးတော်လှန်ရေး၌ ကျဆုံးသွားသူများ စာရင်း
၂၀၂၁ ဖေဖော်ဝါရီ ၁ ရက်တွင် မြန်မာနိုင်ငံ အာဏာသိမ်းခံရသည့်အတွက် မခံမရပ်နိုင်သော လူထုမှ မြန်မာ့နွေဦးတော်လှန်ရေးအမည်ဖြင့် ဆန္ဒပြခြင်း၊ သပိတ်မှောက်ခြင်းများ ပြုလုပ်လျှက်ရှိကြသည်။ ဆန္ဒပြပွဲများတွင် ငြိမ်းချမ်းစွာဆန္ဒဖော်ထုတ်ခြင်းများ၊ ထိုင်သပိတ်ပြုလုပ်ခြင်းများစွာ ပါဝင်သော်လည်း အာဏာပိုင်များဘက်က နှိမ်နင်းမှုများကြောင့် မတ်လ ၂၉ ရက်နေ့အထိ မြန်မာနိုင်ငံတစ်ဝှမ်းတွင် ၅၁၀ ဦးခန့် သေဆုံးခဲ့သည်ဟု နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများကူညီစောင့်ရှောက်ရေးအဖွဲ့က ထုတ်ပြန်သည်။ လွတ်လပ်သောသတင်းမီဒီယာများက သတင်းရယူရန်ခက်ခဲသောကြောင့်လည်းကောင်း မြန်မာနိုင်ငံတွင် မိုဘိုင်းလ်အင်တာနက်များပိတ်ပင်ခံထားရမှုကြောင့်လည်းကောင်း တော်လှန်ရေ ...
အင်္ဂလိပ်အမည်လမ်းများကို မြန်မာအမည်ပြောင်းလဲခြင်း ၁၉၄၄ခုနှစ် စက်တင်ဘာ၂၃ရက် ရန်ကုန်မြို့တော် အီဒင်လမ်း အနောက်အောင်ဇေယျလမ်း ဂျူဒါအီဇိကယ်လမ်းနှင့်စတော့တိတ်လမ်း သိမ်ဖြူလမ်း ကရိစ်လမ်း ကျုံးလမ်း မားချင့်လမ်း ကုန်သည်လမ်း ဖယ်ဇာလမ်း ပန်းဆိုးတန်းလမ်း ကင်နယ်လမ်း ဥက္ကလာပလမ်း ဖိုက်ချ်လမ်းနှင့်ရှမ်းလမ်း ရှမ်းလမ်း ဆင်ပဆင်လမ်း ပြည်သူ့ဆေးရုံလမ်း ဆစ်နယ်ပဂိုးဒါးလမ်း တပ်မတော်လမ်း လန်ကတ်စတာလမ်း သရစိမ်းလမ်း ကာလပတ်လမ်း မြန်မာ့ဂုဏ်ရည်လမ်း လိပ်ခ်လမ်း ကန်တော်ကြီးလမ်း နယူးလင်းလမ်း မြို့မကျောင်းလမ်း စပတ်လမ်း ဇေယျလမ်း ချိဖ်လမ်း မနောဟရီလမ်း ဘော်ဒရီလမ်း အလယ်တောရလမ်း ချိုင်းနားလမ်းနှင့်ပဂိုးဒါးလမ်း ဘုရားလမ်း ဒါလဟိုဇီလမ်း ...
သဘာဝတရားရိပ်သာ သည် သက်ကြီးရွယ်အိုများ၊ ယောဂီများ၊ ခိုကိုးရာမဲ့များနှင့် ဂီလာနများကို စောင့်ရှောက်ထားသောနေရာဖြစ်သည်။ကနဦး မြေနေရာ ၃ ဧကကို တပ်မတော်အငြိမ်းစားအရာရှိ ဦးကျော်အေးက လှူဒါန်းခဲ့ပြီး ရိပ်သာအနီးရှိ မြေနေရာများကို ဝယ်ယူခဲ့ပြီးနောက် ၅၈ ဧကအထိ ကျယ်ဝန်းနေပြီဖြစ်သည်။သဘာဝတရားရိပ်သာသည် ဗုဒ္ခမြတ်စွာဘုရားရှင်ကို နမူနာယူပြီး ဘုရားရှင်၏ သာသနာ ကျယ်ပြန့်စေရန် တရားအားထုတ်သောအလုပ်ကိုသာ အဓိကထားသော ရိပ်သာဖြစ်ပြီး ရိပ်သာမြေနေရာအားလုံးသည် တရားကို အားကိုးလိုသော ခိုကိုးရာမဲ့သူများ အတွက်သာဖြစ်သည်။
၁၉၄၂၊ စက်တင်ဘာလ ၆၊ နေ့လယ် ၂ နာရီတွင် ဂျပန်ခေတ်ဆေးရုံကြီး ယခု နိုင်ငံတော် ကာကွယ်ရေးတက္ကသိုသ် အရှေ့ဘက် အစွန်ဆုံးခန်းမဆောင်တွင် သူနာပြုဆရာမ မခင်ကြည်နှင့် ဗမာ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော် ဗိုလ်ချုပ် ဗိုလ်တေဇတို့ လက်ထပ်မင်္ဂလာပွဲ ပြုလုပ်သည်။ စက်တင်ဘာလ ၇၊ ညနေ ၅ နာရီအချိန်တွင် ရန်ကုန်မြို့ Nippon Military Club မင်တိုမစ်ရှင်ဟိုတယ်၌ ဗမာ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော် ဗိုလ်ချုပ်ဗိုလ်တေဇနှင့် ဇနီး ဒေါ်ခင်ကြည်တို့ မင်္ဂလာထမင်း တည်ခင်းဧည့်ခံကျွေးမွေးသည်။ ၁၉၄၃ ဇွန် ၁၃၊ ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းနှင့် ဒေါ်ခင်ကြည်တို့၏ သားဦး အောင်ဆန်းဦးကို ဖွားမြင်သည်။ ၁၉၄၄ မေ ၁၀၊ ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းနှင့် ဒေါ်ခင်ကြည်တို့၏ ဒုတိယသား အောင်ဆန်းလင်းကို ဖွား ...
စာရေးဒဂုန်တာရာသည် အထက်ပါအဖြစ်အပျက်ကြီးပြီးနောက် ပြည်သူလူထု၏ ဝမ်းနည်းယူကြုံးမရ တသသ ဖြစ်ရပုံကို "ဦးအောင်ဆန်း၏ နောက်ဆုံးနေ့" စာအုပ်တွင် အောက်ပါအတိုင်းဖော်ပြထားလေသည်။ ဝမ်းနည်းဖွယ်ကောင်းလေစွ။ မိုးလင်းကတည်းကပင် ကောင်းကင်သည် အုံ့မှိုင်း ညိုမှိုင်းလျက်ရှိသည်။ တိမ်တိုက်ဟူ၍ ဘာမျှ ကြည်လင်စွာ မမြင်ရ။ မိုးကို ကြည့်ရသည်မှာ မြူသန်းနေသော ပင်လယ်ပြင်ကြီးလို ဝိုးဝိုးဝါးဝါး နေသည်။ မိုးသည် ကင်းကင်းလွတ်လွတ် စဲသည်ဟူ၍ မရှိဘဲ တဖွဲဖွဲ နေလိုက်၊ တဖြိုင်ဖြိုင် ရွာချလိုက်နှင့်။ နောက် စွေ၍နေလေသည်။ ဇူလိုင်လ ၁၉ ရက်၊ စနေနေ့ နံနက် ၁ဝနာရီခွဲ။ ဒီကနေ့ အတွင်းဝန်များရုံးသို့ သွားစရာရှိသည်။ တိုင်းပြုပြည်ပြု လွှတ်တော်အထူးအရာရှိ ဦး ...
ရန်ကုန်ဆေးရုံကြီး ကို ရန်ကုန်ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီးဟုလည်း ခေါ်သည်။ ရန်ကုန်ဆေးရုံကြီးသည် ရန်ကုန်မြို့၊ လသာမြို့နယ်တွင် တည်ရှိသည်။ ရန်ကုန်ဆေးရုံကြီးသည် ရန်ကုန်မြို့ရှိ အဓိကကျသော ပြည်သူ့ဆေးရုံတစ်ရုံဖြစ်သည်။ ဆေးရုံဝန်းမှာ ၃၅ ဧကရှိပြီး ကုတင် ၂၀၀၀ ဆံ့ အထွေထွေရောဂါကု ဆေးရုံဖြစ်သည်။ ရန်ကုန်ဆေးရုံကြီးတွင် အတွင်းလူနာများအတွက် ဆေးကုသဆောင် ၃ဆောင်၊ ခွဲစိတ်ကုသဆောင် ၃ဆောင်၊ ထိခိုက်ဒဏ်ရာနှင့် အရိုးရောဂါကုသဆောင် ၁ဆောင်နှင့် အထူးရောဂါကုသဆောင် ၂၄ဆောင်ရှိသည်။ ထို့အပြင် ဆေးကုသဆောင်၊ ခွဲစိတ်ကုသဆောင်နှင့် ထိခိုက်ဒဏ်ရာဆောင်များအတွက် အရေးပေါ်ဌာနများလည်း ရှိသည်။ ရန်ကုန်ဆေးရုံကြီးတွင် ဆရာဝန်ပေါင်း ၃၀၀ယောက်နှင့် သူနာပြုပေါင်း ၄၀၀ယောက်ခန့် အမှုထမ်းလျှက်ရှိသည်။
ရန်ကုန်ဆေးရုံကြီးသည် ဝိတိုရိယခေတ် ဗိသုကာပုံစံဖြစ်သော အနီရောင်အုတ်ခဲနှင့် အဝါရောင်ဆေးများဖြင့် မွမ်းမံတည်ဆောက်ထားသောကြောင့် ထင်ရှားကျော်ကြားသည်။ ရန်ကုန်ဆေးရုံကြီးသည် ဆေးတက္ကသိုလ်၁ ရန်ကုန်၊ သူနာပြုတက္ကသိုလ်ရန်ကုန်နှင့် ဆေးဘက်ဆိုင်ရာ နည်းပညာတက္ကသိုလ်ရန်ကုန်တို့၏ အဆင့်မြင့်သင်ကြားရေးဆေးရုံကြီးဖြစ်သည်။
ရန်ကုန်ဆေးရုံကြီးသည် အများအားဖြင့် ပုဂ္ဂလိကဆေးရုံများတွင် ကုသမှုမခံယူနိုင်သော သို့မဟုတ် နိုင်ငံရပ်ခြားသို့ သွားရောက်မကုသနိုင်သော လူများအတွက် ဖြစ်သည်။
3. သင်ကြားရေး အစီအစဉ်များ
ရန်ကုန်ဆေးရုံကြီးသည် ဆေးတက္ကသိုလ်၁ ရန်ကုန်၏ အဓိကသင်ကြားရေး ဆေးရုံကြီးဖြစ်သည်။ သူနာပြုတက္ကသိုလ်ရန်ကုန်နှင့် ဆေးဘက်ဆိုင်ရာ နည်းပညာတက္ကသိုလ်ရန်ကုန်တို့မှ သူနာပြုသင်တန်းသားများနှင့် ဆေးဘက်အကူများကိုလည်း သင်ကြားပို့ချပေးသည်။
3.1. သင်ကြားရေး အစီအစဉ်များ ဒီပလိုမာ Dip.Med.Sc.
3.2. သင်ကြားရေး အစီအစဉ်များ ဘွဲ့လွန် M.Med.Sc.
3.3. သင်ကြားရေး အစီအစဉ်များ အခြားသင်တန်းများ
၂၀၂၁ မြန်မာ့နွေဦးတော်လှန်ရေး၌ ကျဆုံးသ ..
အင်္ဂလိပ်အမည်လမ်းများကို မြန်မာအမည်ပြ ..